Umbuzo we-MySQL wokuTsala iindidi kwiWordPress | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 6, 2007 Lwesine, Okthobha 23, 2014 Douglas Karr
Kutshanje, kubonakala ngathi iiposti endizibhalileyo ngobomi bam basekhaya zabonakala ngathi zifumana ukujonga iphepha ngakumbi kwezinye izihloko zam. Iyaxhasa into yokuba ukubhloga yinto etsala abafundi ngakumbi ngenxa yoko bendifuna ukufumanisa. Naziphi na izithuba zam ezichaphazela ubomi bam, ndongeza umbuzo othile. Zonke ezinye iindidi zisetyenziswa ngokusekwe kumxholo. Ndikwenze ngenjongo ngenjongo yokuba ekugqibeleni ndinike ingxelo ngayo. Lifikile elo xesha!
Akululanga njengoko unokucinga, kodwa. Yonke le nkqubo ithathe iiyure ezimbalwa ukusuka kwidatha yokuxela! Umceli mngeni wokuqala yayikukukhupha idatha kwiziko ledatha lebhlog yam. Kwi-WordPress, ifuna umbuzo olungileyo wokujoyina phakathi kweetafile ezintathu, iiposti, iiposti2, kunye neendidi. Ukuba ungathanda ukwenza oku, nanku umbuzo:
KHETHA `umhla_post``,` cat_name` FROM `wp_posts` LEFT JOIN` wp_post2cat` ON` wp_posts`.ID = `wp_post2cat`. Post_id LEFT JOIN` wp_categories` ON ​​`wp_categories`.cat_ID =` wp_post2`
Qaphela ukuba uya kufumana ngaphezulu kwesinye irekhodi ngasemva ngeposi ukuba ukhethe iindidi ezininzi kwisithuba. Kulungile, eneneni ndijongana nohlalutyo lwam.
UGoogle wenza kube lula ukutsala idatha ngomhla oyifunayo kunye nokuthumela ngaphandle njengefayile ye-CSV. Nditsalile nje uluhlu lomhla olufanayo kunye nenani lokujonga iphepha. Ndiye ndadibanisa zombini imithombo, iiposti zebhlog kunye neendidi kunye neembono zekhasi elinxulumene noko. Izinto ezimnandi!
Inyathelo elilandelayo lolonwabisayo! Kukho uthotho lwemibuzo kunye namanyathelo ekufuneka uhambile kuwo (andifuni ukuya kwiinkcukacha ezininzi apha) kodwa iziphumo ezisisiseko kukuba ndifuna ukubala inani lokujonga iphepha elahlulwe ngenani lezithuba kudidi ngalunye. Ndaye emva koko ndibala i-avareji yokujonga ngeposi kuyo yonke ibhlog yam kwaye ndithelekise iziphumo.
Into oyibonayo apha ngezantsi kukuhlalutya kwesalathiso sePhepha lokujonga ngeCandelo. Cofa kumfanekiso ukuba ungathanda ukuwubona ubungakanani obupheleleyo. Isalathiso se-100 ngumndilili. Isalathiso sama-200 sithetha ukuba udidi lwalunokubetha kabini ukubetha kweposti ephakathi. Isalathiso sama-50 sisiqingatha somndilili.
Ayisiyiyo le nto bendiyilindele, kodwa ndicinga ukuba enye yayo iyavakala. Kwiphepha eliphantsi kakhulu lesikali (ngasekunene), sibona imixholo egcweleyo, akunjalo? Ezopolitiko, iTekhnoloji, ishishini, ukubhloga, njl. Sikwabona izihloko ezithile, ezinje ngeemephu zikaGoogle. Kuba ayisosihloko siphambili sebhlog yam, Akuthandabuzeki ukuba nditsala umdla omkhulu woku.
Umphambili wasekhaya wawuphantse wafa! Ndacinga ukuba izakubonisa ngaphezulu kodwa inyani yokuba ingekho ngaphantsi kwesalathiso indixelela ukuba ayiyenzakalisi ibhlog yam. Ngaba iyanceda? Mhlawumbi kugcino, kodwa hayi umbono ochanekileyo wephepha.
Eyona nto igquma phezulu ziindawo zobungcali endinazo. Uhlalutyo… wow! Ndicinga ukuba le yindawo yesihloko ekhwaza uncedo. Akukho web zininzi kakhulu kubahlalutyi iiblogs phaya! Abantu bafuna ukwazi indlela yokusebenzisa kubahlalutyi, uyenza njani, kwaye unika ingxelo njani kwaye wenze utshintsho olusekwe kuyo (njengale post!).
Enye into enomdla yeyam "Ukufundwa kweMihla ngemihla". Ndacinga ngokuqinisekileyo ukuba ezo ziya kuba phakathi kwendlela, kodwa ke zikwinqanaba eliphezulu kakhulu. Abantu banomdla kule nto ndiyifundayo kwaye ndiyabacebisa! Ndiziva ndilungile. Yonke imihla ndifunda amakhulukhulu ezondli kunye neesayithi kwaye ndizama ukubuyisa amabali awodwa anokuxatyiswa ngabantu. Amaxesha amaninzi, ezi ziqhagamshelo kwezinye iiblogi endizifumana zinomdla kwaye ndifuna ukuzidlulisa. Kubonakala ngathi ulwalamano oluchaphazelekayo koku kuhlawula!
Apho unayo! Iminyaka exabisekileyo yedatha yokufunda! Ndingathanda ngokwenene ukwenza kube lula kakhulu ukwenza olu hlalutyo ngexesha elizayo. Ndifuna ukusebenza ngokuzenzekelayo ngokwamacandelo kwi kubahlalutyi iingxelo ukuze ndibeke iliso kubo kufutshane.
Juni 7, 2007 ngo-5: 40 AM
Into endiyifumanisayo inomdla malunga nenombolo yokuFunda yemihla ngemihla kunqabile ukuba, ukuba kunjalo, ndifunde uluhlu lwezithuba zonxibelelwano. Kodwa phantse ndihlale ndifumana ukuskena okwakho.
Ndacinga ukuba kungenxa yokuba sinomdla ofanayo, kwaye kunokuba njalo. Kodwa kujongeka ngathi iyabetha kunye nabanye abafundi abaninzi.
Ndifumene izinto ezintle ezivela kuFundo lwakho lwemihla ngemihla. Mhlawumbi unawo nje amandla okucoca nge-junk yethu 🙂
Juni 7, 2007 ngo-6: 57 AM
Ngokuqinisekileyo yile nto ndiyilandeleyo, Tony. Kunqabile kakhulu ukuba ndikhethe ikhonkco elingaphandle kwesihloko sebhloko yebhlog yam ... kwaye ndiyawafunda ngokwenyani la manqaku kwaye ndiyawathanda ngaphambi kokuba ndiwathumele!
Ndizifumana kwindawo [ehlekisayo] enkulu yeendawo, kubandakanya izilumkiso zeinjini yokukhangela, iibhlog, iisayithi zokubhukisha kwezentlalo, njl.